सबैलाई तिनीहरूलाई उत्तिकै हानिकारक हुन सक्छ को मानव शरीर को स्वास्थ्य मा एक विशाल भूमिका मात्र होइन खनिज, तर पनि भिटामिन कमी वा अतिरिक्त खेल्ने थाह छ। भिटामिन सी शरीर, भिटामिन ए, भिटामिन र ई को सुरक्षा गुण लागि जिम्मेवार छ - छाला, नङ, भिटामिन डी क्याल्सियम र हड्डी बलको उचित Assimilation लागि को सौन्दर्य लागि। र यति मा - सूची लामो हुन सक्छ।
तर के भिटामिन बी को आरोप मा? र जसरी - यो सामान के हो? के खाद्य पदार्थ भिटामिन बी समावेश?
सामान्य मा, भिटामिन बी - यस्तो riboflavin, pyridoxine, रूपमा भिटामिन, सम्पूर्ण समूह को नाम फोलिक एसिड, thiamin, niacin, pantothenic, cobalamin, बायोटिन। शरीर मा आफ्नो महत्त्व धेरै गाह्रो Overestimate।
यी भिटामिन निकायको कक्षहरू सबै प्रक्रियाहरू संलग्न छन्। र तिनीहरूलाई बिना, केही प्रतिक्रिया असम्भव छ। बी भिटामिन शरीर द्वारा ऊर्जा उत्पन्न गर्न ग्लूकोज लागि महत्त्वपूर्ण कुरा, र यसरी छन्। साथै, डाक्टर भन्न - यी भिटामिन मानव स्नायु प्रणाली को सही कार्यका लागि महत्त्वपूर्ण छन् लागि एक व्यक्ति निराश वा उहाँले अक्सर -perhaps खराब मुड छ भने, यो भिटामिन बी को कमी को एक लक्षण छ। साथै, भिटामिन ई ऐ साथ छ - स्वस्थ नङ, छाला र कपाल को एक महत्वपूर्ण अंश। बी भिटामिन को कमी - आँखा र कलेजो स्वास्थ्य एउटा खतरा छ।
र तपाईं खाद्य पदार्थ के समावेश जान्नु आवश्यक केही भिटामिन को कमी को लागि क्षतिपूर्ति कसरी थाहा गर्न भिटामिन बी, डी वा सी र के परिमाणमा। केही उत्पादनहरु भिटामिन ई, को पाठ्यक्रम पनि महत्त्वपूर्ण।
निस्सन्देह, आज धेरै भिटामिन परिसर छन्, समूह बी को भिटामिन सहित तर यी भिटामिन प्राकृतिक भन्दा धेरै बुरा शरीर द्वारा अवशोषित छन् साबित छ, कि खाना बाट लिइएको हो।
खाद्य पदार्थ समावेश के भिटामिन बी आफैलाई राम्रो आकार र काम अवस्थामा, साथै रोग को सामना गर्नु राख्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ जान्न।
यी महत्त्वपूर्ण पदार्थ कलेजो, पागल, माछा, चामल, दूध, मासु, अन्डा, हरियो तरकारी र फलफूल जस्ता खाद्य पदार्थ मा धनी।
त्यसैले, शरीर मा प्रतिक्रिया ऊर्जा गठन लागि जिम्मेवार भिटामिन, तपाईं यस्तो अनाज, रातो मासु, अण्डाको पहेंलो भाग, फल, खमीर, आलु, रोटी र पागल रूपमा खाद्य पदार्थ खान आवश्यक thiamine को कमी, को लागि क्षतिपूर्ति गर्न। खुला भएको अन्तस्करणले मार्फत उत्सर्जित रूपमा यो भिटामिन को अतिरिक्त खतरामा छैन। एक दोष थकान, खतरनाक मांसपेशी atrophy, कमजोरी। नियम, यो भिटामिन साह्रै alcoholics घटी छ। स्वस्थ मान्छे मा, आफ्नो कमी दुर्लभ छ।
जसमा उत्पादन भिटामिन बी समावेश - riboflavin? यो तत्व श्लेम लाग्एको झिल्ली, छाला को स्वास्थ्य को लागि जिम्मेवार छ।
Riboflavin स्टक अनाज, मासु, अन्डा, पनीर, मटर र दूध खाने द्वारा replenished छन्।
यो के मा खाद्य पदार्थ समावेश थाहा महत्त्वपूर्ण छ भिटामिन B6 वा pyridoxine।
यो आवश्यक छैन टाढा यो संग जान छ - यो नसाहरू गर्न क्षति हुन सक्छ।
यो माछा तेल, अनाज, फलियां र कलेजो मा निहित छ। Pyridoxine अझै पनि उत्पादन को एक किसिम र एकदम ठूलो परिमाणमा हुन्छ, त्यसैले घाटा जानाजानी शरीर देखि "आउटपुटहरू" र उदाहरण, दुरुपयोग रक्सी को लागि, आफ्नो अवशोषण तोड्न गर्नेहरूको विशेषता छ।
के खाद्य पदार्थ भिटामिन बी 12 समावेश? एक स्वस्थ स्नायु प्रणाली लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो भिटामिन। उहाँले बिरूवा मूल को खाना मा फेला परेन र जीवाणुहरु द्वारा संश्लेषित छ। कलेजो, अन्डा yolks, मासु - खोज पशु उत्पादन हुनुपर्छ।
फोलिक एसिड, वा अर्को तरिकामा - भिटामिन B9। यो शरीर द्वारा फलाम को अवशोषण लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, र यसैले, रगतमा हेमोग्लोबिन को स्तर वृद्धि गर्न। र फलस्वरूप, शरीर प्रतिरोध लागि। र थाहा भिटामिन बी9के खाद्य पदार्थ समावेश, यो पनि आवश्यक छ। र यो, अघिल्लो अवस्थामा रूपमा, लगभग सबै बोट खाद्य पदार्थ मा।
Lenten खाने: खाना पकाउन के?
खाद्य पदार्थ बोसो मा धनी: तालिका
जो उत्पादनहरु दबाव छन्, र के - कम
Tonality को अवधारणा बाटो के हो
सिलाई मिसिन "Dzhanome 2325": समीक्षा
रातो anthurium फूल। हेरविचार र मर्मत
Structuralism - यो छ ... structuralism को आधारभूत विचार
"Niperten" हो। प्रयोगको लागि निर्देशन।
Petrovsky महल - यात्राहरु र फोटो
Kriminalno- अत्यन्तै सामयिक नाटक श्रृंखला "लाइन पार"। अभिनेता र भूमिकाको
होटल एंजेला होटल3* भियतनाम, Nha Trang: अवलोकन, सुविधाहरू, र समीक्षा कोठा
विश्लेषण शेष पाना